Poise Jiro Azo Ovaina Dia Jiro - Famolavolana
Jiro Azo Ovaina Dia Jiro
Alakamisy 28 Oktobra 2021
Jiro Azo Ovaina Dia Jiro Ny fisehoana akrobatika an'ny Poise, jiro latabatra noforonin'i Robert Dabi an'ny Unform.Studio dia miova eo anelanelan'ny static sy dynamique ary fihetsika lehibe na kely. Miankina amin'ny refy eo anelanelan'ny peratra nanazava sy ny sandry mihazona azy, dia misy tsipika mifampitohy na mikatona mankany amin'ny faribolana. Rehefa apetraka amin'ny talantalana ambony kokoa dia mety manarona ny talantalana ny peratra; na tamin'ny fihodinana ilay peratra, dia nikasika ny rindrina manodidina. Ny tanjon'io fanitsiana io dia ny hahatonga ny tompona handray anjara mavitrika ary milalao amin'ny loharanom-pahazavana mifanaraka amin'ny zavatra hafa manodidina azy.
Anaran'ny tetikasa : Poise, Anaran'ny mpamorona : Dabi Robert, Anaran'ny mpanjifa : unform.
Talata 26 Oktobra 2021
Ny vokatra jiro sy ny fananganana tetikasa jiro
Oli Lovia Oliva Alakamisy 28 Oktobra
Bridal Veil Ny Chandelier Alarobia 27 Oktobra
Illusion Tranokala Talata 26 Oktobra
Fanadihadihana famolavolana ny andro Alakamisy 28 Oktobra
Tantara momba ny andro Alarobia 27 Oktobra
Famolavolana ny andro Talata 26 Oktobra
Mpamorona ny andro Alatsinainy 25 Oktobra
Ekipa mpamorona ny andro Alahady 24 Oktobra
Jiro Azo Ovaina Dia Jiro Dabi Robert Poise